Somaliland: "Xisbiga KULMIYE waa Xisbi Guul-darro soo arkay oo Ummaddu Kalsooni ku qabto.” Cabdicasiis M. Samaale - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Xisbiga KULMIYE waa Xisbi Guul-darro soo arkay oo Ummaddu Kalsooni ku...
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ka mid ah Mas’uuliyiinta Xisbiga KULMIYE, ayaa sheegay in Xisbul-xaakimku aqbalayo natiijada Doorashada Madaxtooyada ee Dalka ka dhacaysa 13-ka bisha November, 2017-ka haddii Alle yidhaahdo.
Cabdicasiis Maxamed Samaale oo hadal ka jeediyey Munaasibad uu Xisbiga KULMIYE ku qabsaday Hargeysa, ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin Cod-bixiyeyaasha Somaliland inay dooranayaan Musharraxiinta Xisbiga KULMIYE, maaddaama oo ay Shacabku ogyihiin Mudakarnimada Xisbiga, Xisbiyada Mucaaradka ahna looga baahan yahay inay ballan-qaadaan inay aqbalayaan Natiijada Doorashada, iyagoon wax Shuruud ah ku xidhin.
Samaale oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Maaha wax lagu kala badinayaa Cayda, maaha wax lagu kala badinayaa Aflagaadada. Xisiga KULMIYE maaha Xisbi Caytama oo Dadka Aflagaadeeya, labada Xisbi ee kale waa Xisbiyo Qaran, waxa innaga dhexeeyaa waa tartan nadiif ah oo la doonayo in Codka Dadka lagu kala kasbado”
Mr. Samaale wuxuu kalsooni weyn ka muujiyey in Shacabka Somaliland mar kale dooranayaan Xisbul-Xaakimka KULMIYE “Waxaynu hubnaa inaynu KULMIYE ahaan Codka Dadka reer Somaliland Badidiisa helayno.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu tilmaamay in ka sakow kalsoonida ay ku qabaan in Shacabku KULMIYE dooranayaan, haddana ay mar walba aqbalayaan Natiijada Doorashada ka soo baxda “KULMIYE wuxuu leeyahay doorashadu markay dhacdo natiijada soo baxda KULMIYE boqolkiiba boqol ayuu aqbalayaa, miyeynu Natiijada soo baxaysa ka baqaynaa, Xisbiga baqaya marka la yidhaahdo Natiijada doorashada ka soo baxda ma aqbalaysaa? Markaaba HAA ma odhanayo ee wuxuu odhanayaa ‘Hadday Xor noqoto, hadday Xalaal noqoto’ oo Shardi ayuu ku xidhayaa, taa Macnaheedu waxa weeyaan Doorashada natiijadeeda wuu ka baqayaa, laakiin KULMIYE wuu aqbalayaa, Waayo? wuxuu ku kalsoon yahay Dadka codaynaya. Xisbiga KULMIYE waa Xisbi Guul-darro soo arkay oo guul-darro soo arkay oo Ummaddu Kalsooni ku qabto.”